चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा के माग्ने ? विज्ञ भन्छन्- माग्ने मात्रै काम नगरौं – Life Nepali
११ असोज, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ अक्टोबरको तोस्रो सातातिर नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । २३ वर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई लिएर नेपालमा सरगर्मी बढेको छ ।तर, सरकारीस्तरको तयारी हेर्दा भने भ्रमणबाट नेपालले ठूलै उपलब्धी हात पार्ला! भन्ने अहिलेसम्म छाँटकाँट देखिँदैन । भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच रेल सम्झौता हुने चर्चा भए पनि नेपालको तर्फबाट ठोस तयारी छैन ।यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा झिनामसिना लेनदेन गरेर आलोचित बनेको सरकार राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि चुक्न सक्ने पर्याप्त जोखिम छ ।विज्ञहरु भने यो भ्रमणलाई नेपालले जसरी पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
खासगरी नेपालले चीनसित पूर्वाधार निर्माणको विषयमा ठोस छलफल र सम्झौता गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकबाट नेपालले धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने भए पनि नेपाल केवल मगन्तेको शैलीमा प्रस्तुत हुन नहुने विज्ञको सुझाव छ ।प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा विज्ञहरुले व्यक्त गरेको धारणा-ठूला र अर्थपूर्ण आयोजनाको पहल गर्नुपर्छ- राधेश पन्त, लगानी बोर्डका पूर्वसीईयोचिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालले दुई देशबीच कनेक्टिभीटीका पूर्वाधारमा जोड दिनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा चीनको अनुभव राम्रो छ ।, रेल वा हवाई लगायत अरु के हुन सक्छ, त्यसमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ ।
दुई देशबीचको व्यापारमा नेपाल पछाडि पर्नुको एउटा मुख्य कारण कमजोर पूर्वाधार पनि हो ।यो भ्रमणमा नेपालले धेरै योजना पस्केर भन्दा पनि यसअघि नै निक्र्यौल गरिएको आयोजनामा नमूना विकासको मोडलका रुपमा काम गर भनेर चीनियाँ पक्षलाई आश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ । जस्तो- बुढीगण्डकी परियोजना बनाएर देखाउ वा सिगात्सेबाट काठमाडौं रेलले जोडिदेउ जस्ता अर्थ राख्ने आयोजनामा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ ।नेपालका विविध आयोजनामा नेपाल र चीनबीच भएको विवाद र समस्याहरु यो भ्रमणले सल्ट्याउनुपर्छ । जस्तो- मेलम्चीको काउण्टर ग्यारेन्टी अझै नेपाली बैंकले पाएका छैनन्, चिनियाँ पक्षले पाएका केही आयोजनाहरुको प्रगति राम्रो छैन, यस्ता विषय चीनप्रति अविश्वासको संकेत हुन््
।विश्व अर्थतन्त्रको महाशक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेको चीनले नेपाल विकास गर्दा उसलाई घाटा छैन, यसर्थ विश्व राजनीति लेनदेन (गिभ एण्ड टेक) पनि हो । चीन आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालमा के-कस्तो विकास गरिदिन चाहन्छ, नेपाली नेतृत्वले त्यो बुझ्नुपर्छ र त्यसै अनुसार डिल गर्नुपर्छ ।भूराजनीतिक महत्व नबुझी आफ्ना एजेण्डा मात्रै प्रस्तुत गरियो भने त्यो कमजोर भइदिन सक्छ । नेपालको अर्को नराम्रो प्रवृत्ति सधैँ अनुदान माग्ने भन्ने मात्र छ, माग्ने मात्रै काम नगरौं ।
पूर्वाधारमा निर्माणमा अडान आवश्यक- रवी शंकर सैँजु, वाणिज्य विज्ब्यापारका सम्बन्धमा नेपाल-चीन छलफल बार्ता भइरहेकै छ । सी भ्रमणममा पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले अडान राख्नु आवश्यक छ ।
चाहेर, नचाहेर हामि भोलि ट्रान्जिट मुलुकका रुपमा विकास हुने नै हो । दुई विशाल मुलुकको बीचमा स्थायी र दीर्घकालीन ब्यापार पूर्वाधार भयो भने नेपालमा लगानीको वातावरण बढ्ने कुरामा दुई मत छैन ।चीन चाहन्छ कि नेपाल भएर भारतको ठूलो बजारमा प्रवेश गरौं । भारत पनि पक्कै चाहन्छ, नेपाल हुँदै चीन पस्न पाइयोस् । कम्तिमा नेपालमा आउने लगानीले चीन र भारतको ठूलो बजारलाई देखोस् भन्ने हेतुले नेपालले तयारी गर्नुपर्छ ।रेल, सडकजस्ता पूर्वाधार आवश्यक रहेको कुरा राष्ट्रपति सीलाई नेपालले बुझाउनु सक्नुपर्छ । केही नाकाहरुको सञ्चालनबारे चीनले बोलेको र अग्रसरता देखाएको छ । तर, पूर्वको नाका खोल्नेबारे नेपालले कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।
मेनु छोटो तर महत्वपूर्ण होस्- टंक कार्की, चीनका लागि पूर्वराजदूत
नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो । विकासको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि स्रोत अभाव छ । पूर्वाधार विकासका लागि सडक, रेल, हवाई जस्ता विषयमा नेपालले चीनबाट लिनुपर्ने सहयोग धेरै हुन सक्छ ।चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि नेपालले अघि सारेको योजनामा चीन सहयोगका लागि तयार छ भनेका छन् । यसको मतलब, अब बल नेपालको कोर्टमा छ । अब लामो ‘मेनु’ लिएर होइन कि नेपालको प्राथमिकता क्रम तोकेर नेपालले चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । सरकारले निश्चित मुद्दामा आफ्नो धारणा बनाउन ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
चीनसँग भएको प्रविधि र पूँजी नेपालले कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् । तर, बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको प्रतिवद्धतामा चीन आश्वस्त भने हुनैपर्छ ।विकासको ध्येयका निम्ति नेपालले आफ्ना छिमेकी मित्रहरुको सहयोग लिनु अनिवार्य छ । तर, सहयोगका नाममा राजनीतिक वा सामरिक स्वार्थ भारत वा चीनबाट भित्र्याउन जरुरी छैन । विकासका लागि मित्र मुलुकहरुसँगको सहयोगले नेपालमा भित्रिने लगानी सबैको हितकर पनि हुन्छ ।
झिनामसिना कुरामा भन्दा पूर्वाधार सहयोग लिनुपर्छ- कल्याण शर्मा, चीन विज्ञनेपालले चीनसँग सिक्न सक्ने मुख्य विषय भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । चीनले पूर्वाधारमा गरेको लगानी नेपालका लागि रोल मोडल हुन सक्छ । नेपाली भूगोलमा चिनियाँ पूर्वाधार ज्ञानमार्फत नेपाल चीनसँग जोडिने बलियो सेतु हुन सक्छ ।नेपालमा निकै लामो समयपछि भएको यो भ्रमणमा चिनियाँ पक्ष केही दिन चाहन्छ । तर, नेपालले कसरी तयारी गर्छ, त्यसैमा उनीहरुको निर्णय आउला । झिनामसिना कुरामा भन्दा पनि नेपालले पूर्वाधारलाई आधार बनाएर चीनसँग सहयोग लिनका लागि तयारी गर्नु उचित हुन्छ ।
Previous साम्राज्ञी भन्छिन” एउटा फिल्म खेलेको २० लाख लिने गरेकी छु”
Next २५ गाउँका सर्वसाधारणलाई उ’ठिबास लगाउने श्याम प’रदेशी जे’ल च’लान